यी पाँच चर्चित मोडल जसले पोर्न फिल्मदेखि बलिउड-हलिउडसम्म आतंक मच्चाए | Online Nepal
यी पाँच चर्चित मोडल जसले पोर्न फिल्मदेखि बलिउड-हलिउडसम्म आतंक मच्चाए
काठमाडौँ । पोर्न इन्डस्ट्री विश्वभर एडल्ट फिल्मका लागि परिचित छ । यस उद्योगका धेरै ताराहरु विश्वभर निकै लोकप्रिय छन् । आज हामी तपाईलाई पोर्न फिल्मका केही यस्ता अभिनेत्रीहरुको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ, जसले अहिले यो उद्योगलाई पूर्ण रुपमा अलविदा गरिसकेका छन् । विशेष कुरा के छ भने यी अभिनेत्रीहरु अहिले अन्य क्षेत्रमा पनि नाम कमाउन थालेका छन् ।
मिया खलिफाको नाम त हामी सबैले सुनेको होला । मिया खलिफा एडल्ट फिल्मकी निकै चर्चित अभिनेत्री थिइन् । यद्यपि उनले पोर्न इन्डस्ट्रीमा निकै छोटो समयका लागि काम गरेकी थिइन् । उनी छोटो समयमै निकै चर्चित भइन् । त्यसपछि उनी पोर्न इन्डस्ट्री छोडेर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भइन् । आज उनी चर्चित मोडल हुन् ।
सन्नी लियोनलाई कसले चिन्दैन ? आज सन्नी लियोनी बलिउडमा धेरै नाम कमाइरहेकी छिन् । पहिले उनी पोर्न इन्डस्ट्रीमा काम गर्थिन् । उनले सन् २०१३ मा पोर्न इन्डस्ट्री छोडेकी थिइन् । त्यसपछि सन्नी बिग बोसको ५ औं सिजनमा देखा परिन् । त्यहिबाट उनले बलिउडमा काम गर्न थालिन् । आज भारतमा धेरै मानिस सन्नीका लागि पागल छन् । उनले धेरै फिल्म र आइटम गीतमा अभिनय गरेकी छिन् ।
साशा ग्रे कुनै समय पोर्न इन्डस्ट्रीकी चर्चित अभिनेत्री थिइन् । अहिले उनी एडल्ट फिल्मबाट सन्यास लिएर हलिउडमा नाम कमाइरहेकी छिन् । साशाले ‘द गर्लफ्रेन्ड एक्सपिरियन्स’ बाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन् । आजकल उनी विज्ञापन, म्युजिक एल्बम र म्यागजिनको कभर पेजमा देखिने गर्छिन् । साशाले किताब पनि लेखेकी छिन् ।
जेना जेमसन पोर्न इन्डस्ट्रीकी चर्चित अभिनेत्री थिइन् तर सन् २००८ मा उनले एडल्ट फिल्मबाट टाढा भइन् । यसपछि सन् २०१३ मा उनी मोडलिङको दुनियाँतिर लागिन् । आज जेना एक सफल व्यवसायी हुन् । यसबाहेक उनी टेलिभिजनकी सेलिब्रेटी पनि हुन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनले WWE मा पनि भाग लिएका छन्।
क्रिसी मोरनले पोर्न उद्योगमा १० वर्ष काम गरिन् । उनले सन् १९९६ देखि २००६ सम्म एडल्ट फिल्म गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनी अध्यात्मतिर लागिन् । अब उनी वयस्क वेबसाइटहरूबाट आफ्ना भिडियोहरू हटाउन कानुनी लडाई लड्दै छिन्।
बलिउड कलाकारबलिउड नायिका
बलिउड अभिनेत्री जाह्नवीले पोशाकमा पानी जस्तै पैसा बगाइन्, मूल्य सुन्दा छक्क !
यी पाँच बलिउड अभिनेत्री जसले बोल्डनेसकै कारण इन्टरनेटको तापक्रम समेत बढाए !
उर्फी जावेदको ‘हट स्टाइल’ले फ्यानलाई फेरि बनायो पागल, भिडियो बन्यो भाइरल
चियाले जिब्रो पोलेपछि पवन सिंहले लगाइदिए मोनालिसाको मुखमा आगो (भिडियो)
बलिउड नायिका दियाको सौतेनी छोरीसँगको डान्स भाइरल (भिडियो)
माल्दिभ्स पुगेर बिकिनीमा खुलिन् सन्नी लियोन, फ्यानले भने- चिसोमा तातो भो !
पल-समीक्षा ‘प्रेमकथा’ले लियो अर्कै मोड, फेसबुक स्टाटस सत्य नभएको खुलासा !
टाउकोमा दोपट्टा बाँधेर सलमानले गरे यस्तो घोषणा, फ्यानले भने- अब पर्खन सक्दैनौं